Ọrụ Email Dị Mfe (Amazon SES) - SMTP na Igwe ojii
Tuesday, February 1, 2011 Saturday, October 29, 2011 Adam Obere
Dị ka onye ọrụ nke Amazon Web Services, M na-enweta ozi ịntanetị mgbe ụfọdụ site na ha na-akpọsa ọrụ ọhụụ ma ọ bụ na-akpọ m oku ka m kere òkè na ụfọdụ beta ma ọ bụ ndị ọzọ. N’izu gara aga, enwetara m email na-akpọsa Ọrụ Email Dị Mfe Amazon.
Amazon SES bụ isi ihe mmepe. Ọ bụ kpọmkwem maka ndị chọrọ ịmepụta sistemụ email / ahịa ha nke onwe ha ma ọ bụghị iji ikpo okwu Ndị Na-enye Ọrụ Email (ESP). Ọ bụ ihu ọma SMTP na ígwé ojii. Amazon na-ekwe ka ndị mmepe nyefee azụmahịa na nnukwu (aka ahịa) ozi email site na sava email ha, maka obere ọnụahịa. Ọrụ a na-ekwe nkwa iwepu ibu nke scalability, nhazi sava email, njikwa adreesị IP, aha nnabata ISP nzaghachi na nsogbu ndị ọzọ metụtara metụtara ịnyefe na izipu nnukwu email. All Mmepụta kwesịrị iche banyere na-eke email (html ma ọ bụ doo ederede) na-enyefe ya Amazon maka nnyefe.
Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ Email (ESP) na-enye Mmemme Mmemme Ngwa (API) enwere ike iji ya n'ụdị yiri ya mana ọ nwere ike ịnwe njedebe njedebe nke Ọrụ Ọrụ Weebụ Amazon na ụdị ọnụahịa nke, n'ọtụtụ oge, na-akwụ ụgwọ karịa ọ na-eme ka ọ dị otu na-eche ihe mmetụta ọrụ a ga-enwe na Email Service Provider n'ahịa. M na-achọsi ike ịhụ ọnụ ọgụgụ nke ESP ndị ọzọ ga-amalite na Amazon SES dị ka ntọala ha - nke nwere ike ịkọwa ụfọdụ nsogbu maka ụlọ ọrụ ọrụ email bara nnukwu uru.
Ì chere na Amazon SES ga-enwe mmetụta ESP's? Kedụ maka ndị ahụ ha na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ma na-ana ụgwọ nnukwu ụgwọ iji nweta API ha?
Feb 1, 2011 na 3:48 PM
M na-agwa ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na nke a nwere ike bụrụ nnukwu ihe mmebi nye nnukwu ndị na-enye ọrụ email bụ ndị na-arụ ọrụ OEM. Simply nweghi ike ị nweta ọnụ ahịa karịa ọrụ a - ọbụlagodi na ịnwere ịgba ndị ndụmọdụ ndụmọdụ ịnapụta n'elu ya!
Feb 1, 2011 na 6:57 PM
Nanị ihe mgbochi ịmalite ESP nke gị bụ ya bụ olu Amazon na-etinye ọnụego na ọnụego ya. Ma ọnụego kwa nke abụọ na ngụkọta eziga kwa ụbọchị nwere oke ruo mgbe ị gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke mkpa ahụ. Nwere ike nweta otu ebe ị nwere ike izipu otu nde ozi ịntanetị kwa ụbọchị mana ọ ga-ewe oge. Ihe ọhụrụ ESP nwere ike ịka mma na sistemụ ngwakọ nke SMTP dị n'ime ya na ọrụ Amazon ruo mgbe ha nwere ogo email na-agbanwe agbanwe. Ma ọ bụghị ya, ha nwere ike ịda mba karịa oke enyere ha aka.
Feb 21, 2011 na 10:12 PM
Ha achọghị ESP, chee maka ugbu a ọ ga - abụrịrị onye ọkachamara ga - ewuru ya onwe gị email marketeer ha mechara